Abashayeli | October 2021
Main > Abashayeli
ngokuvumelana ikhibhodi umshayeli
Umshayeli wekhibhodi yeHarmony - isixazululo se
Yini Isaziso Sokushayela Iphakethe? I-DriverPack Notifier wuhlelo olwenziwe yi-DriverPack Solution. Uhlobo olusetshenziswe kakhulu yi-2.0. ... Ngemuva kokufakwa nokusethwa, ichaza ukungena kokubhalisa okuzenzakalelayo okwenza lolu hlelo lusebenze ebhuthini ngalinye leWindows kukho konke ukungena ngemvume komsebenzisi.
Ukubuyekezwa kwe-driver whiz - uxazulula kanjani
Ingabe i-snowball eluhlaza okwesibhakabhaka idinga abashayeli? I-Snowball iCE imayelana nokwenza kube lula kuwe ukuqedela amaphrojekthi owathandayo. Kungakho yakhelwe ukusebenza nanoma iyiphi isoftware kunoma iyiphi ikhompyutha — vele ungene bese uqala. Awudingi ngisho nabashayeli.
umshayeli we-polaroid snap
Umshayeli we-Polaroid snap - izixazululo ze-pragmatic
Ngabe ikhompyutha yami ingafunda amakhadi e-SDXC? 3 Izimpendulo. Ukunikezwa ukwesekwa kwesoftware, noma imuphi umfundi wekhadi le-SDHC uyakwazi ukufunda amakhadi we-SDXC. 2012
khipha umseshi womshayeli
Khipha umphenyi womshayeli - ireferensi ephelele
Ngabe umseshi womphenyi uphephile? Kuyisoftware ezoskena, ikhombe futhi ifake noma ivuselele abashayeli bekhompyutha ukuze bakwazi ukusebenzisa zonke izinto zehadiwe ezifana nekhadi levidiyo, ukuxhumana kwenethiwekhi njll. Silufakile futhi saluhlola lolu hlelo futhi alunalo igciwane.
ukuvuselelwa kwesimangaliso somshayeli
Ngiwuthola kanjani umbhobho wami ukuthi usebenze ku-Rock Band? Ungayisebenzisa kanjani iMakrofoni ye-Rock Band njenge-PC MicIfaka isiphetho se-USB se-Rock Band Microphone yakho kunoma iyiphi imbobo evulekile ye-USB kwi-PC yakho noma kwi-Laptop. ... Ngokuya ngohlobo lwakho lwe-Windows, ungahle ucelwe ukuthi uvumele iWindows ukuthi ifune umshayeli. ... IWindows izofaka futhi ilayishe umshayeli weMakrofoni ye-Logitech USB.
ihome driver driver
Ihome driver driver - ungabhekana kanjani nayo
Ngilanda kanjani umshayeli we-MPOW? Inketho 1: Faka umshayeli we-MPOW Bluetooth ngesandlaKhibhodi yakho, cindezela u-Win + R (ukhiye we-logo we-Windows nokhiye we-r) ukucela ibhokisi elithi Run. Thayipha noma unamathisele i-devmgmt. ... Qhafaza kabili i-Bluetooth ukukhulisa i-node. Qhafaza kwesokudla i-adaptha yakho ye-Bluetooth bese ukhetha Vuselela umshayeli.Chofoza okuthi Sesha ngokuzenzakalela kubashayeli. 7 mei 2021
khipha umshayeli wompompi
Khipha umshayeli wompompi - Qedela iManuwali
Uyini umshayeli wompompi we-VPN? I-TAP-Windows Adapter umshayeli wenethiwekhi, osetshenziswa ngamasevisi e-VPN ukuxhuma kumaseva. Lokhu kusho ukuthi kumakhasimende amaningi e-VPN (i-ExpressVPN, i-NordVPN, i-CyberGhost, njll.) Kuyinto edingekayo ukuyifaka kudivayisi yakho.